Ukusabela Injection - Shenzhen Youde Prototype kungagcini
RIM kuyinto entsha inqubo indlela ngokukhiqiza usayizi esikhulu futhi imikhiqizo omkhulu ubuningi ngokushesha. inqubo RIM kuyinto monomer noma pre-polymer (PU izinto) esimweni liquid nge Ingxenye ezithile kukalwa the metering futha kuhlangana e ukuxuba Inhloko isikhunta. Ngemva ingxube injected ku isikhunta ngaphansi ongaphakeme ingcindezi / Igumbi lokushisa imvelo, kuyoba ngokushesha futhi cross-ngokuxhumanisa sokwelapha. Ngemuva kwemizuzu engu-ngaphezulu eziyishumi, kuyothiwa eqina, bese ukuyikhulula kusukela isikhunta, ukuthi ingxenye kuyinto umkhiqizo RIM. Le nqubo kungenziwa lula njengoba: isitoreji, nesilinganiso, hybrid, isikhunta ukugcwaliswa sokwelapha, demould nangemuva ukucubungula.
Inqubo Reaction Injection Molding
amabili okuhlaza ketshezi ezisetshenziselwa inqubo RIM zigcinwe ezimbili kwesigubhu okushisa ezithile, ichibi kuyinto ngokuvamile ingcindezi isitsha. Ngo udini, stoste ngokuvamile 0.2 ~ 0.3 MPA ingcindezi ongaphakeme echibini, futhi afundwa njalo echibini, ukushisa kanye ukuxuba ikhanda. Kepha polyurethane, izinga lokushisa isilinganiso stoste 20 ~ 40 ℃, ukunemba ukulawula izinga lokushisa ± 1 ℃.
Material ngoba RIM
Jikelele resin ezivamile: polyurethane resin, vinyl ester, amide ester resin, resin unsaturated, epoxy resin Traditional impahla esiyinhlanganisela, njll
Ngokuvamile impahla: HD-PU4210, DCP-RIM, AXSON-RIM 875, njll.
PS: Isikhathi angawokuphulukisa inqubo RIM ngokuyinhloko yisinqumo ekwakhiweni udini impahla kanye nosayizi umkhiqizo. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo RIM akudingeki kwenzekani angawokuphulukisa yesibili ngemva kokukhululwa kusukela isikhunta. Futhi njengoba inqubo RIM kuyashesha (imizuzu 15-30 / ucezu) kanye ephezulu ukucacisa, kulingane ukukhiqiza inqwaba futhi omkhulu imikhiqizo usayizi, kanye nobukhulu enkulu ekusakazeni part 2000mmX1200mmX1000mm, ngoba 10kg.